Otu esi etinye nleba anya sistemụ nlele na Linux Mint 20 - LinuxCapable
Otu esi etinye ihe nleba anya sistemụ nlele na Linux Mint 20
October 12, 2021 September 22, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Nyochaa Sistemụ Nleba anya
Otu esi eji nlele Sistemụ Nleba anya
Mkpu na nlele Sistemụ Nleba anya
Iwu nleba anya sistemụ
Otu esi ebido ilele na ihe nchọgharị webụ
Otu esi ebido Glances Client-Sava mode
Otu esi emelite nlele site na iji PIP3
Otu esi ewepu (wepụ) Nyochaa Sistemụ Nleba anya
Otu n'ime njirimara mara mma Glances na-akwado bụ ikike ịtọ oke na mmemme. Ị nwere ike idobe nlezianya, ịdọ aka ná ntị, na nke siri ike na faịlụ nhazi ahụ, nke ga-ebufe ozi na agba nke nwere ike igosi ọkwa maka nkwụsị nke akụrụngwa sistemụ, nsogbu akụrụngwa sistemụ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Nlere anya, na ndabara, na-abịa na ndepụta agba agbagoro agbagoro, mana ị nwere ike gbanwee ma tinye nhazi agbakwunyere.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ma jiri Glances na Linux Mint 20.
Site na ndabara, a na-egosipụta Glances System Monitor na ebe nchekwa Ubuntu, yabụ na ọ ga-adị na Linux Mint. Iji wụnye, jiri iwu dabara adaba:
Nyochaa nrụnye site na ịlele ihe nrụpụta Glances:
Ozugbo itinyechara mmemme ahụ, ịkwesịrị pịnye iwu ọnụ ọnụ iji weta ya.
Dịka ekwuru na mmalite nkuzi, Glances nwere agba maka ọkwa. Ihe na-esonụ na-akọwa ihe ha bụ.
Pịgharịa gaa ala (Akara nke 37), ị ga-amalite ịhụ ntọala niile ị nwere ike ịgbanwe.
Gbanwee ọnụọgụgụ, yabụ CTRL + O ịzọpụta, yabụ CTRL + X ịpụ apụ. Ihe ndabara kwesịrị ịdị mma maka ọtụtụ ntọala onye ọrụ; naanị dezie ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na ụkpụrụ ndị a.
Ị nwere ike iji iwu ndepụta ndị a na Glances iji hazie, chọta ma gosi ihe ị na-achọ.
to - Hazie usoro na-akpaghị aka
p - Hazie usoro n'aha
d - Gosi/zoo stats I/O disk ols
f - Gosi/zoo sistemu faịlụ statshddtemp
n - Gosi/zobe ọnụọgụ netwọkụ
s - Gosi/zoo stats sensọ
y - Gosi/zoo stats hddtemp
l - Gosi/zobe ndekọ
b - Bytes ma ọ bụ bits maka netwọk I/Oools
w - Hichapụ ndekọ ịdọ aka ná ntị
x - Hichapụ ịdọ aka ná ntị na ndekọ dị egwu
h - Gosi/zoo ihuenyo enyemaka a
t - Lelee netwọk I/O dị ka ngwakọta
ị - Lelee netwọk I/O nchịkọta
q- Kwụsị (Esc na Ctrl-C na-arụkwa ọrụ)
Ị nwere ike nyochaa nlele na ihe nchọgharị weebụ kachasị amasị gị. Iji malite ọrụ ihe nchọgharị na mmemme ahụ, mee ihe ndị a.
Rịba ama na ị ga-ahụrịrị na ngosipụta ọnụ "Nleba anya interface onye ọrụ webụ malitere na http://0.0.0.0:61208" mgbe ị na-abanye iwu a. Nke a nwere ike ịdị ntakịrị mgbagwoju anya, ọ na-ejikwa adreesị IP nke ihe nkesa ahụ.
Nbanye na sava dịpụrụ adịpụ, malite mmemme nlele na ọnọdụ n'akụkụ sava.
Nyere anya ka etinyere na iji njikwa ngwugwu APT, jiri iwu a:
Ọ bụrụ na mmelite dị, jiri iwu nkwalite nke dabara emelite ngwugwu niile ma ọ bụ ngwugwu n'otu n'otu.
Ọ bụrụ na ịchọghị inwe nlele na sistemụ arụmọrụ Mint Linux gị, iji wepu ya n'uju, jiri iwu a:
ụdị "Y", wee pịa "Tinye igodo" ka ịga n'ihu na iwepụ ya.
Nyochaa Sistemụ Nleba anya bụ nzọụkwụ dị elu karịa ndabara "n'elu" ngwugwu maka nlekota akụrụngwa na nhazi usoro. Ngwungwu a dị mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ nyocha nke ọma nke sistemụ gị. Ọ na-ekpuchi ọtụtụ ozi ma weta ya na koodu agba iji gosi ihe data dị n'ihu gị pụtara yana otu o si emetụta ihe nkesa gị.
Categories Mint Linux Tags Nyochaa Sistemụ Nlele, Mint 20 Mint Linux Mail igodo
Otu esi etinye Discord na Linux Mint 20